I-Interactive Terminal yinkqubo yokurekhoda ephilayo yokulawula iklasi ehlakaniphile, enomsebenzi wokurekhoda okuphilayo kunye nentetho ephilayo. Isetyenziswa kakhulu kwiiklasi ezivulelekileyo kunye nezifundo zokurekhoda ezikolweni, ixhasa ukurekhoda isifundo esipheleleyo sokufundisa ngevidiyo kunye ne-audio, ikwaxhasa ukwabelana ngezifundo zokufundisa ukusuka kwiklasi enye ukuya kwamanye amagumbi okufundela.
I-Interactive Terminal yinkqubo yokurekhoda ephilayo yokulawula iklasi ehlakaniphile, enomsebenzi wokurekhoda okuphilayo kunye nentetho ephilayo. Isetyenziswa kakhulu kwiklasi evulelekileyo kunye nezifundo zokurekhoda ezikolweni, ixhasa ukurekhoda isifundo esipheleleyo sokufundisa ngevidiyo kunye ne-audio, ikwaxhasa ukwabelana ngezifundo zokufundisa ukusuka kwiklasi enye ukuya kwamanye amagumbi okufundela.
Ukwabelana ngeklasi esemgangathweni: Ukwakhiwa kweklasi yesikolo esikwinqanaba lesixeko esinezixhobo zokufundisa ezikumgangatho ophezulu yintetho edibeneyo yokurekhoda nokusasaza igumbi lokufundela, izixhobo zokufundisa ezikumgangatho ophezulu zisasaza ividiyo, iaudio, iigraphics kunye nesicatshulwa ngeqonga lonxibelelwano, kwaye zigcinwe njengezixhobo zokufundisa ngokurekhoda kunye nokurekhoda. inkqubo yosasazo, usasazo olubukhoma, imfuno efunwayo, ulawulo kunye nolawulo olubekwe kwindawo enye kwizixhobo zokufundisa ngesoftware yeqonga.
* Ukufundisa okuSebenzayo kwe-K-12 (Ngenkqubo yekhompyutha, igumbi lokwamkela elisebenzisanayo linokunxibelelana negumbi leNtetho)
* Ukufunda kude (Umfundi unokufunda kumgama omde)
* Ukufunda kwi-Intanethi (Umfundi unokufunda kwi-Intanethi)
* Imfundo ephezulu
* Imfundo yoMsebenzi
Ngaphambili: Interactive Whiteboard
Okulandelayo: I-Conference Interactive Flat Panel
Isisombululo seterminal esiSebenzayo
1.Itheminali eSebenzayo* Yegumbi lokusingatha* Ubungakanani: 586*358*65mm;* Ii-OS ezimbini (Linux + Windows);* INkqubo yokuRekhoda eKholwa ngesoftware;* I-OPS eyakhelwe-ngaphakathi: i3, 4G, 128G + 1T, WIFI, Win10;* Ikhamera yoxwebhu;
* Uyilo olutshixwayo ngekhibhodi eyakhelweyo
* I-2.4G+ ekude nge-mic (Ngokhetho)
Iikhamera ze-2.HD* Ikhamera ye-4-mesh HD* I-1 pair/2pcs= Enye yeyootitshala kunye neyomfundi* Isigqibo: 1920 * 1080
3.Imakrofoni ejingayo* Irediyasi yokuqonda isandi 6M
4.LED Interactive Panel 65inch (Ezinye iziboniso ngokuzikhethela)
* Iphaneli yesikrini sokuchukumisa i-4K, i-anti-glare;
* Amanqaku angama-20 achukumisa
Fro Igumbi Lecture
1.Itheminali eSebenzayo* Yegumbi lokusingatha* Ubungakanani: 240 * 175 * 36.5mm;* Ii-OS ezimbini (Linux + Windows);*INkqubo yokuRekhoda eKholwayo enesoftware;* Ikhompyuter ye-OPS eyakhelwe-ngaphakathi: i3, 4G, 128G, WiFI, Win10;*I-2.4G+ ekude nge-mic(Ngokuzikhethela);
Ikhamera ye-2.HD* Isiqwenga esinye, somfundi* Isigqibo: 1920 * 1080* Imakrofoni eyakhelwe-ngaphakathi
3.LED Interactive Panel 65inch (Ezinye iziboniso ngokuzikhethela)
inkqubo yokurekhoda ephilayo
imfundiso ephilayo kwi-intanethi